တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: အားရနေလို့ … အားကျစေဖို့ …
Nice interview.. Thanks..
8/19/2011 1:31 AM
ဆက်ရန်ကို အားရ၊ အားကျ စွာဖြင့် စောင့်မျှော်နေပါတယ်။
8/19/2011 2:34 AM
ဒီပို့စ်လေးပြီးရင် ပြည်တွင်းက လူတွေကိုလည်းဖတ်စေချင်လိုက်တာ ဂျာနယ်တစ်စောင်စောင်ကိုပို့ကြည့်ပါလား အားကျစရာကြီးဗျာ တကယ်တော်ပြီး လေးစားဖို့တော်တော်ကောင်းတယ် ။
အင်း.. တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်.. ဖတ်နေရင်း အသက်ရှူဖို့တောင်မေ့တယ်... စိတ်ဝင်စားလို့.. ဆက်ပြီးတင်ပေးပါဦး..
ဖတ်ခွင့်ရလို့ကျေးဇူး အစ်မရေ ... ခဏ ခဏ လာဖတ်ဖြစ်ပေမဲ့ မန့် တော့မမန့် ဖြစ်ဘူးရယ် .. အခု ဒီမပြည့်ပြည့်ကိုတော့ အရမ်းချီးကျူးမိတယ် ..သိပ်လည်း အားကျတယ်ဗျာ .. နောက်အပိုင်းလေးတွေလည်း စောင့်ဖတ်နေမယ်နော် .. ဖေ့ဘွတ်မှာ ရှယ်ပါရစေလို့...
M.A Religions: Buddhist နဲ့ မြန်မာပြည်က ၃ယောက် အဲ ၂ပါး နဲ့ တယောက် တောင် ဘွဲ့ယူ မှာ ဆိုတော့ အားကျစရာဘဲ တကယ်ကိုချီးကျူး ဂုဏ်ယူ ပါတယ်
စာလေး ဖတ်ရင်းနဲ့ နံမည်ကြီး ဟားဘတ် ဆေးတက္ကသိုလ် ကို သိပ်တက်စေချင် တဲ့ အဖေ့ အတွက် သားက နောက်ဆုံး မတတ်နိုင်တော့ သူခန္ဒကိုယ် ကိုဘဲ ဟားဘတ် အတွက် လှူဒါန်း ခဲ့တယ် ဆိုတာကို သတိရသွားတယ်
ဟားဟားးးး အခုလည်း ဘယ်လို လုပ်ရပါ့မလည်း
စိတ်ဝင်စားစွာ ဆက်ရန် လေးကို မျှော်နေမယ်နော်
8/19/2011 4:04 AM
referenceတွေ အရမ်း ကောင်းလွန်းတယ်ဆိုတာလေးကို အရမ်း စိတ်ဝင်စားသဗျာ။
8/19/2011 5:04 AM
8/19/2011 5:23 AM
မပြည့်ပြည့်က စာတွေ အရမ်းဖတ်နိူင်တာပဲနော်။ အားကျမိပါတယ်။ ရီမိုးက စာတွေအဲဒီ့လောက်လဲ မဖတ်နိူင်၊ ဖတ်ဖို့လဲ အခွင့်အရေးမရခဲ့တော့၊ အခုလို မပြည့်ပြည့်ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မူ့ ကိုအစွမ်းကုန်ချီးကျူးမိပါကြောင်း........
8/19/2011 6:19 AM
တခါတည်း အပြီးဖတ်ချင်ပါတယ်ဆိုနေ မြန်မြန်နော် မြန်မြန် ကျေးဇူး
အချိန်ဆွဲမနေနဲ့ မြန်မြန်ရေးးးး))))
8/19/2011 12:23 PM
ထူးချွန်ပြီး ပါရမီပါသူများ အားကျဖို့ကောင်းလိုက်တာ။ အခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး ဗဟုသုတတွေ မျှဝေပေးတာကျေးဇူးပါ မေဓာဝီရေ။
ဟုတ်တယ် ကြီးမေရေ မောင်မျိုးပြောသလိုပဲ အဆင်ပြေရင် လုပ်ကြည့်ပါလား။ ချီးကူး၊ ဂုဏ်ယူ၊ လေးစားမိပါတယ် ကြီးမေရေ။ နောက်အပိုင်းအပိုင်းတွေကိုလည်း စောင့်မျှော်နေမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ...
8/19/2011 3:57 PM
တတ်နိုင်ရင် မြန်မာပြည်မှာပါ သတင်းအဖြစ်ပါစေချင်ပါတယ်..
သိပ္ပွံမောင်ဝရဲ့ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ခရီးသွား မှတ်တမ်းကို ပြန်ဖတ်ဖြစ်တာ ဒီလအတွင်းမှာ သုံးခါရှိပြီအစ်မရေ...အသက်တွေကြီးလာပေမယ့် အောက်စ်ဖို့အိပ်မက်ကတော့ အခုထိရှိနေဆဲမို့ အောက်စ်ဖို့အကြောင်းကို မကြာမကြာရှာဖတ်ဖြစ်တယ်...
မြန်မာပြည်ပေါက်တွေ၊ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ အောက်စ်ဖို့မှာတက်ကြတာ ဘွဲ့ယူကြတာတွေမြင်ရရင် အင်မတန်မှကို ၀မ်းသာဂုဏ်ယူမိပါရဲ့...ဒီတစ်ယောက်ကတော့ မဟာဘွဲ့တောင်ရခဲ့တာ ပိုလို့ဂုဏ်ယူမိပါတယ်...
ဒါတင်မကဘဲ သူယူတဲ့ဘွဲ့ကို ကြည့်လိုက်တော့ ဂုဏ်အယူမိဆုံးဖြစ်သွားပါတော့တယ်...ဒါတင်မကသေးဘဲ ခရစ်ယာန်အများစုရှိတဲ့ အဲဒီတိုင်းပြည်မှာ Buddhist Studies Pathway လိုဘွဲ့မျိုးထားတာ အင်မတန်မှကို ချီးကျူးဖို့ကောင်းတဲ့အပြင် ဘာကိုပဲလုပ်လုပ် ကျကျနနနဲ့ စေ့စေ့စပ်စပ်လေ့လာတတ်တဲ့ သူတို့လူမျိုးရဲ့ အကျင့်စရိုက်ကိုလည်း အတုယူသင့်တယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်...
ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာက မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုပဲ ဖြစ်နေကြပြီး ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရဲ့ အနှစ်သာရနဲ့ လမ်းစဉ်ကို အခြေခံကျကျမသိတဲ့လူတွေများနေတာကို ကိုယ်တိုင်တွေ့နေ၊ မြင်နေရတော့ ကိုယ့်ဆီမှာလည်း အဲဒီလိုဘွဲ့မျိုး ရှိသင့်တယ်လို့လည်း ယူဆလိုက်မိပါသေးတယ်...တစ်နေ့နေ့ကျရင်တော့ ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လဲ ယုံကြည်မိပါရဲ့...အရာအားလုံးဟာ ယုံကြည်မှုအပေါ်မှာ မူတည်တယ်မဟုတ်ပါလား အစ်မရေ...
ဒီပို့စ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ပြောပါရစေ...ကိုယ်တိုင်လည်း ဆက်ကြိုးစားချင်တဲ့စိတ်တွေ ပေါ်ပေါက်လာစေလို့ပါ...
If I were her, I will apply PhD in
Econ or Biz at Warwick (better than
University of Birmingham) as there are 17 chancellor scholarships.
8/20/2011 3:56 AM
8/20/2011 5:45 AM
ကွန်မန့်တွေအတွက် အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ ရှယ်ပေးတာလဲ ကျေးဇူးပါ။ နောက်အပိုင်းကို အားတဲ့အချိန်လေး ရေးပြီး တင်ပေးပါမယ်။ စောင့်ဖတ်မယ့်သူများကိုလဲ အားနာပါတယ် ... လောလောဆယ် မအားသေးလို့ ... မကြာမီ လာမည် မျှော် ...
အတော်ကို ထက်မြက်ပြီး ရင့်ကျက်တဲ့သူလို့ပြောရမယ်ထင်တယ်.... သူ့ လိုသာ လုပ်လိုက်လို့ကတော့ ဂေါက်သွားမလားပဲ..... Independent study တွေ ကျနော်တို့ အားနည်းလွန်းတယ်။ သူဒီဘာသာရပ်ကို ပြောင်းလိုက်ပေမယ့် ကယ်ရီယာ မပြောင်းဘူးဆိုတာလေး စိတ်ဝင်စားမိတယ်။ ဘယ်လိုရပ်တည်ပါလိမ့်နော်။
အားလည်း ကျတယ်..ဂုဏ်လည်း ယူတယ်..အောက်စ်ဖို့ စ် နဲ့ဟားဘတ်နဲ့ တက်ရတဲ့ သူတိုင်းကို အထင်ကြီး လေးစားတယ်..ဆက်ဖတ်ရန် စောင့်မျှော်နေပါသည်...
အားကျစရာ၊ အားရစရာတွေ လာဖတ်သွားပါတယ်။
ကျေးဇူးပါ မမေရေ ။
ဂုဏ်ယူစရာ မြန်မာမိန်းကလေး တစ်ဦးပါပဲ။ သေသေချာချာ ဂရုတစိုက်နဲ့ အမေးအဖြေလေးတွေက ဖတ်ရသူတွေကို စိတ်အား တက်ကြွစေပါတယ်။
ကိုယ့်လူမျိုးတွေရဲ့ ကောင်းသတင်းကြားတိုင်း ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်လျှင် သူ့ရဲ့ သီးစစ်အတွက် guideline ကိုဆရာက ဘယ်လိုချပေးသလဲ၊ သီးစစ်ရဲ့ contribution က ဘာလဲ၊ သီးစစ် examiner တွေက ဘယ်လိုလူတွေလဲ စသည်အပြင် future career path က ဘာလဲ၊ မာစတာ အတွက် ကျောင်းစားရိတ်တွေကို ဘယ်လို finance လုပ်သလဲ နဲ့ ယခင်က ဗုဓ္ဒဘာသာအပေါ်အမြင်နှင့် ယခုအခါအမြင် ဘယ်လိုကွာခြားသလဲ ဆိုတာလေးတွေ ထည့်မေးပေးစေချင်ပါတယ်။
8/27/2011 6:29 PM
part 2????? can't wait..thanks
တကယ့်ကို လေးစားအားကျ ဖို့လည်းကောင်းတယ်
ဂုဏ်လည်းယူတယ်ဗျာ အဲလို အသိပညာရှင် အတတ်ပညာရှင် တွေကို ထို့ထက်မက မြင်ပါရစေ
9/22/2011 4:39 PM
ပျံနိုင်သမျှ မြင့်မြင့် ပျံပါလေ
မိခင်ဧရာဝတီရဲ့ သမီးတော်တစ်ပါးအကြောင်း ဖတ်ရတာ
လူတော် လူကောင်းတစ်ယောက်ကို အားရမိသလို
ကံကြမ္မာ နိမ့်ပါးသူများကိုလဲ သတိရမိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ အောင်နိုင်သူကို အားပေးသလို ရှုံးနိမ့်နွမ်းပါးသူများကိုလဲ လက်ခုပ်တီးအားပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်။
နှစ်ထပ်ရှိမှ မှတ်မိအောင် နောက်တကြိမ်လာဖတ်ပါသည်။
3/24/2013 11:33 AM